पालतू जनावरको रूपमा स्पाइडरहरू | डाउनलोडको लागि निःशुल्क रंगीन पृष्ठहरू
स्पाइडरहरू जस्तै जनावरहरू
पालतू जनावरको रूपमा मकवानहरू - फाइदाहरू
कसले पाल्तुको रूपमा मकईको निर्णय गर्ने हो भने, थाहा पाउनु हो कि उनी एक cuddly खिलौना होइन। मकई कहिलेकाहिँ हातमा राख्न सकिन्छ, तर मुख्यतः जनावरले ताराराममा अस्तुरक्षित बासलाई प्राथमिकता दिन्छ।
स्पाइडर एक जनावरको रूपमा
यदि हात टेरारियम सम्म पुग्छ, यसले मकईहरूको लागि तनाव उत्पन्न गर्दछ, र जनावरले काट्न सक्छ। टेरारीम जसमा स्पाइडर राखिएको छ 30 × 40 सेन्टमिटरको पदचिह्न छ। ऊँचाई 50 सेन्टिमिटर सम्मको माप पर्दछ। मल्लङको समयमा, जनावरलाई खाना खान हुँदैन।
अन्यथा, मकड़ीको खानामा कीराहरू र जीवित अचिनोहरू, जस्तै घाँस काट्नेहरू जसले विशेषज्ञ पसलहरूमा किन्न सकिन्छ। साथै, सधैँ पर्याप्त पानी उपलब्ध हुनुपर्छ। मकवानहरूको मनोवृत्ति एकदम सरल छ। जनावरहरूले पनि नमीको गर्मीको आवश्यकता छैन र झ्यालखाना मलच जस्तै भूमिगत रूपमा।
कुन मकईहरू राख्नको लागि उपयुक्त छ?
एक पालतू जनावरको रूपमा सबैभन्दा लोकप्रिय स्पाइडर प्रजातिहरू, रातो चिलटोट टारारुरुला र साथसाथै लाल-पाद्रा पक्षी स्पाइडर र म्याक्सिकन रातो घेरा टारारुरुला हुन्। पूर्व5देखि6इन्च लामो छ र शान्त र बलियो छ। रातो चिल ट्राटारुले निकै ढिलो हुन्छ र खानाको साथ लामो समयसम्म रोक्दछ। यस घर स्पाइडरको पसंदीदा भोजन कीराहरू र जवान चूहों हुन्।
शान्ति-मायालु रातो-खुट्टा स्पाइडर एक पेड पक्षी मकड़ी र 15 वर्ष सम्मका लागि उमेर हो। यस स्पाइडर प्रजातिको मनपर्दो खाना घाँस काटेर कर्क्रोच हुन्छ। साथै, म्याक्सिकन रातो मुकुट गरिएको टारारुला पालतू जनावरको रूपमा धेरै लोकप्रिय छ र विशेष गरी शुरुमा पहिलो स्पाइडरको रूपमा शुरुका लागि उपयुक्त छ। उनी क्रिकेट वा घाँस काटेर बसेका छन्।
मकवानहरू के खर्च गर्छन्?
प्रजाति र आकार र प्रजातिहरूमा निर्भर गर्दछ, एक टारारुरुले 200 यूरो सम्मको लागत। यसको आकार मा निर्भर गर्दछ, टेरारीम स्पाइडर को लागत को दस र पचास यूरो को बीच को आवश्यकता हो। तल आउनु, 15 लिटर छाल मलच, प्रत्यक्ष खाना जनावरहरू।
मकवानहरू सफा र शान्त छन्
लाइभ गर्न धेरै ठाउँ चाहिँदैन
स्पाइडरहरू हेर्न मनपर्छ
एक सानो हानि
धेरै मानिसहरू मकवानपुरका साथ आफूलाई घृणित र एक वास्तविक आर्योभोफोबिया छ। कुनै पनि व्यक्ति जसले पादरीको रूपमा मकईको रूपमा राख्नुपर्छ, त्यस भ्रमणको आशा गर्नु पर्छ, जो मकवानानबाट घर आउँछ, "घनिष्ठ" त्यहाँ। एक्लै शब्द स्पाइडरले धेरै मानिसहरूलाई असुरक्षित र घोर दिन्छ।
चुपचाप बालबालिकालाई "critters" जोरमा क्रल गर्नुहोस्, धेरैले ह्याकहरू सेट अप गर्दछ। त्यस कारणको लागि तपाई सधैँ दर्शकलाई तुरुन्तै भन्नु हुँदैन कि तपाइँ एक जना जनावरको रूपमा मकवान हुनुहुन्छ।
सागरहरू जस्तै जनावरहरू
बिल्लियों को रूप मा जान्छ
पसलहरु को रूप मा जान्छ
बच्चाहरु को लागि कुत्ते को रूप मा पालतू जान्छन्?
टट्टू को रूप मा एक पालतू जनावर | पाल्तु जनावर र
पालतू जनावरहरू किन महत्त्वपूर्ण छन्?
गोल्डन हम्सटर एक जनावरको रूपमा
मेरो बाथटब र म - केवल शारीरिक हेरविचार भन्दा बढी
बच्चाहरूको लागि छोटो कथा - एक रूपमा एक जनालाई ...